Takian’ny Thailandey mpanao fihetsiketsehana ny anafoanana ny lalànan’ny fanivaivana mpanjaka · Global Voices teny Malagasy
Ampiasain'ny manampahefana ny lalàna hisamborana ireo mpikatroka pro-demaokrasia
Voadika ny 05 Novambra 2021 4:26 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, English, Ελληνικά, English
Nidina an-dalambe mitarika mankany amin'ny fihaonan-dalana Ratchaprasong ny olona. Photo sy soratra nataon'i Prachatai.
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Prachatai, tranokalam-baovao mahaleotena iray ao Thailandy, ary nisy novaina sy navoaka indray ato amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nisy hetsi-panoherana iray notontosain'ny vondrona Ratsadon tao amin'ny fihaonan-dalan'i Ratchaprasong ao Bangkok tamin'ny 31 Oktobra 2021, mitaky ny hanafoanana ny lalànan'ny fanivaivana ny mpanjaka sy ny hanafahana ireo tazonina ho nanitsakitsaka izany. Efa hatramin'ny taona 2020 ny Ratsadon no nikarakara hetsika pro-demaokrasia.
Nanomboka tamin'ny 3 ora filakandro ny diabe ary nifarana tamin'ny 8 ora sy sasany alina. Teny an-toerana ny solontenan'ny kiadin'ny fanarahamaso iLaw nanango-tsonia mangataka amin'ny parlemanta hanafoana ny Fizarana faha-112 amin'ny fehezan-dalàna famaizana, izay mametraka fa hosaziana izay rehetra manova/manaratsy, manompa, na mandrahona ny Mpanjaka, ny Mpanjakavavy, ny Mpandova, na ny Mpitaiza ny mpanjaka (mpitantana vonjimaika mandra-paha-ampy taona ny mpanjaka).
Tamin'ny fotoam-panokafana, Pol Col Kritsana Pattanacharoen, mpitondrateny lefitry ny Biraom-Polisin'ny Mpanjaka Thailandey, nanambara fa samy hitsakitsahan'ny hetsika na ny didim-panjakana noho ny hamehana na ny Lalàna amin'ny areti-mifindra. Nanampy izy fa mikasa hanara-maso ny lanonana ny polisy ary hanangona porofo ho vesatra amin'izay rehetra manitsaka ny lalàna.
Misy ny tranolaim-pihaonana mitady sonia maro ho apetraka any amin'ny parlemanta hanafoanana ny fizarana faha-112.
Nifandimby ireo mpanao fihetsiketsehana naneho tsikera amin'ny lalànan'ny fanivaivana mpanjaka.
Yingcheep Atchanont. Photo avy amin'i Prachatai.
Nanamarika fitomboan'ny lonilony eo amin'ny mpikamban'ny fampitam-baovao, politisiana, fanjakam-birao ary ny vahoaka ankapobeny amin'ilay lalàna izay tsy afa-miteny amin'ny fiantraikan'ny lohahevitra mifandraika amin'ny fitondram-panjaka tokana amin'ny fiainany ry Yingcheep Atchanont, mpitondrateny iray ao amin'ny iLaw.
Mihevitra izahay fa tsara kokoa ny manana lalàna mifintina tsara izay ahafahan'ny olona mahatafantatra izay azo lazaina sy tsy azo lazaina, lalàna izay ahafahanay matoky fa raha marina, am-pisainana, ary mankany amin'ny tombontsoan'ny besinimaro sy ny firenena izay lazainay, dia afa-miteny malalaka izahay ary tsy ho ampangaina na oviana na oviana ho manao fahadisoana.
Mihevitra izahay fa tsara kokoa raha tsaraina amin'ny lalàna mahitsy ataon'ny manampahefana amin'ny fitsarana tsy mitongilana izay manapa-kevitra avy amin'ny zava-nitranga sy ny lalàna, tsy ijerena tontolo ara-politika, ireo olona nanao fanivaivana na nanimba ny hafa,
Mihevitra izahay, fa rehefa tsy mifanara-kevitra mihitsy ny olona manoloana ny olan'ny firenena, dia tsara kokoa ny mametraka ny zava-drehetra an-databatra (imaso imaso) sy mifampiresaka. Avelao ny mpianandrina handroso ny fandresen-dahany sy hiady hevitra amin'ny porofo. Avelao ny olona na aiza na aiza hihaino sy handray anjara amin'ny fanapahan-kevitra amin'izay atao.
Mihevitra izahay fa tsaratsara kokoa ny miaina ao amin'ny fiarahamonina tsy anagadrana olona noho ny fanehoan-keviny ara-politika, mitady fiarahamonina tsara kokoa, ary mba hanamafisana fa ny vahoaka tokoa no tompon'ny fahefana eto amin'ny firenena
Supitcha Chailom. Photo avy amin'i Prachatai.
Nikabary teo amin'ny Fihaonan-dalana Ratchaprasong ihany koa i Supitcha Chailom, mpianatra mpikatroka 19-taona, voampangan'ny fizarana faha-112. Nolazainy fa ampiasain'ny fanjakana ny fizarana faha-112 hanohintohinana olona sy hampisy tahotra amin'ny olompirenena tsy hahasahian'izy ireo mitsikera ny fitondram-panjaka sy iantsoana fanavaozana. Hatramin'ny taona 2020, ampangaina ny olona noho ny ahiahy amin'ny fanaovam-bakisinin'ny Fitondram-Panjaka, fanesoesoana ny alikan'ny mpanjaka, eny fa na dia ny manao tsianjery ampahana poezia aza.
Arakaraka ny ampiasanareo [ny fizarana faha-112] no haharava haingana kokoa izay zavatra tianareo arovana
Nikabary ihany koa i Phromsorn Viradhammajari avy amin'ny vondrona Ratsadon Mutelu, nanamarika fa na diaandrim-panjakana mahazo tetibolam-panjkana aza ny mpanjaka tokana, dia tsy misy ny fanarahamasom-bahoaka amin'ireo manampahefana tinendrim-panjaka na amin'ny tetikasan'ny mpanjaka.
Nolazainy fa nampiasain'ny tompomenakely sy fitondram-panjaka tokana sy ny fizarana faha-112 hamoretana vahoaka amin'ny filazana fa ireo mivory hisian'ny fanavaozana demaokratsika dia miezaka ny hanaisotra ny rafi-panjakana entim-panjaka.
Ny tena marina, tianay ny fitondram-panjaka tokana. Raha tsy notiavinay izay dia tsy nitaky fanaovaozana izany izay mba ho eo ambany lalampanorenana. Fa noho ny fitiavanay izany no nitakianay fanavaozana. Fa satria tsy nohavaozina io dia mety hisy ny revolisiona.
Tany amin'ny faran'ny fihetsiketsehana, Panussaya Sitthijirawattanakul, mpianatra mpikatroka avy amin'ny Oniversiten'i Thammasat, no namaky fanambaràna avy amin'ny vondrona Ratsadon mametraka fitakiana roa lehibe: manome fahafahana vonjimaika ireo mpikatroka politika rehetra voahazona sy fanafoanana ny fizarana faha-112.
Ny fitakiana folo hanavaozana ny fitondram-panjaka natolotra tamin'ny 10 aogositra 2020 dia natao hamahana ny kizo ara-politika eto Thailandy sy hanairana ny amin'ny fanandratana-fivavahana olo-malaza. Natao ireny fitakiana ireny mba hahatonga an'i Thailandy ho fitondram-panjaka manana lalampanorenana, izay miavaka amin'ny fametrahana ny satro-piandrianana ho eo ambany lalàna sy azon'ny vahoaka araha-maso akaiky tahaka ny rafi-panjakana demaokratika rehetra…
Hiasa hiaraka amin'ny vondrona hafa rehetra, vondronasa rehetra, fikambanana rehetra ary ny tsirairay ao amin'ny fiarahamonina izahay Antokom-Bahoaka (Khana Ratsadon) manohana ny fanesorana ny lalàna #112 sy hiantohana ny zon'ny gadra politika hahazo fahafahana vonjimaika (mandoa onitra solofonja). Manana nofy izahay fa ho feno fanambinana ny fiarahamonina thailandey eo ambany fialokalofan'ny demaokrasia tena izy, ambany fahafahana, fitoviana, ary firahalahiana.